Yohane Nhoma a Edi Kan 2:1-29
Yesu, mpata afɔre (1, 2)
Yedi n’ahyɛde so (3-11)
Ahyɛde dedaw ne foforo (7, 8)
Nea enti a ɔrekyerɛw (12-14)
Monnnɔ wiase (15-17)
Wɔn a wɔsɔre tia Kristo ho kɔkɔbɔ (18-29)
2 Me mma nkumaa, merekyerɛw eyinom abrɛ mo, na moanyɛ bɔne. Nanso ɛba sɛ obi yɛ bɔne a, yɛwɔ ɔboafo* bi wɔ Agya no nkyɛn. Ɔno ne ɔtreneeni+ Yesu Kristo.+ 2 Ɔyɛ mpata afɔre+ ma yɛn bɔne;+ ɛnyɛ yɛn nko ara de, na mmom wiase nyinaa nso de ka ho.+ 3 Sɛ yɛkɔ so di n’ahyɛde so a, ɛno na ɛma yehu sɛ yenim no. 4 Sɛ obi ka sɛ, “Minim no,” na wanni n’ahyɛde so a, ɔyɛ ɔtorofo, na nokware no nni saa onipa no mu. 5 Na obiara a odi n’asɛm so no, saa onipa yi mu na Onyankopɔn dɔ awie pɛyɛ+ ampa. Eyi na ɛma yehu sɛ yɛne no yɛ baako.+ 6 Nea ɔka sɛ ɔne no yɛ baako no, ɛyɛ n’asɛde sɛ ɔkɔ so nantew sɛnea onii no nantewee no.+ 7 Adɔfo, nea merekyerɛw abrɛ mo yi, ɛnyɛ ahyɛde foforo. Mmom ɛyɛ ahyɛde dedaw a munya fii mfiase no.+ Ahyɛde dedaw yi ne asɛm a motee no. 8 Bio nso, merekyerɛw ahyɛde foforo abrɛ mo. Saa ahyɛde no yɛ nokware wɔ ɔno ne mo nyinaa fam, efisɛ esum no retwam, na nokware hann no rehyerɛn dedaw.+ 9 Sɛ obi ka sɛ ɔwɔ hann no mu, na ɔtan+ ne nua a, ɔda so ara wɔ sum no mu.+ 10 Nea ɔdɔ ne nua no, ɔte hann no mu,+ na hintidua biara nni ne mu. 11 Na obi a ɔtan ne nua de, ɔte sum mu,+ na ɔnam sum mu, na onnim baabi a ɔrekɔ,+ efisɛ esum no afura n’ani. 12 Mma nkumaa, merekyerɛw mo, efisɛ ne din nti, wɔde mo bɔne akyɛ mo.+ 13 Agyanom, merekyerɛw mo, efisɛ moabehu nea ɔwɔ hɔ fi mfiase no. Mmerante, merekyerɛw mo, efisɛ moadi ɔbɔnefo no so nkonim.+ Mmofra nkumaa, merekyerɛw mo, efisɛ moabehu Agya no.+ 14 Agyanom, merekyerɛw mo, efisɛ moabehu nea ɔwɔ hɔ fi mfiase no. Mmerante, merekyerɛw mo, efisɛ mo ho yɛ den,+ na Onyankopɔn asɛm te mo mu,+ na moadi ɔbɔnefo no so nkonim.+ 15 Monnnɔ wiase anaa nneɛma a ɛwɔ wiase.+ Sɛ obi dɔ wiase a, Agya no ho dɔ nni ne mu.+ 16 Efisɛ nea ɛwɔ wiase nyinaa, ɔhonam akɔnnɔ+ ne aniwa akɔnnɔ+ ne asetena mu nneɛma a nnipa de hoahoa wɔn ho* no, emfi Agya no, na mmom efi wiase. 17 Afei nso, wiase ne n’akɔnnɔ retwam,+ na nea ɔyɛ ade a Onyankopɔn pɛ no tena hɔ daa.+ 18 Mmofra nkumaa, bere a edi akyiri no ni. Sɛnea moate sɛ nea ɔsɔre tia Kristo* no reba+ no, seesei mpo, wɔn a wɔsɔre tia Kristo* bebree aba.+ Eyi na ɛma yehu sɛ bere a edi akyiri no ni. 19 Wofi yɛn mu na ɛkɔe, nanso na wɔnka yɛn ho.*+ Sɛ wɔka yɛn ho a, anka wɔne yɛn tenae. Nanso wofii yɛn mu kɔe sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛda adi pefee sɛ, ɛnyɛ obiara na ɔka yɛn ho.+ 20 Na mo de, ɔkronkronni no+ asra mo, na mo nyinaa mowɔ nimdeɛ. 21 Ɛnyɛ sɛ munnim nokware no+ nti na merekyerɛw mo. Mmom nea enti a merekyerɛw mo ne sɛ, munim nokware no, na atoro biara mfi nokware no mu mma.+ 22 Hena ne ɔtorofo? Ɔno ne nea onnye ntom sɛ Yesu ne Kristo+ no. Oyi ne nea ɔsɔre tia Kristo*+ no, nea ɔpo Agya no ne Ɔba no. 23 Obiara a ɔpo Ɔba no, onni Agya no nso.+ Na obiara a ogye Ɔba no tom+ no, ɔwɔ Agya no nso.+ 24 Mo de, nea moate afi mfiase no, momma ɛntena mo mu.+ Sɛ nea moate afi mfiase no tena mo mu a, mo nso mobɛtena Ɔba no mu, na moatena Agya no mu. 25 Bio nso, eyi ne ade a ɔno ara de hyɛɛ yɛn bɔ no, daa nkwa.+ 26 Nea merekyerɛw abrɛ mo yi, ɛfa wɔn a wɔpɛ sɛ wɔdaadaa mo no ho. 27 Na mo de, ɔsra a munya fii ne hɔ+ no te mo mu, na enhia sɛ obi kyerɛkyerɛ mo; mmom sɛnea ɔsra a munya fii ne hɔ no kyerɛkyerɛ mo nneɛma nyinaa+ na ɛyɛ nokware na ɛnyɛ atoro no, sɛnea ɛkyerɛkyerɛɛ mo no, mo ne nea ɔsraa mo no nyɛ baako.+ 28 Enti afei, mma nkumaa, mo ne no nyɛ baako, na sɛ wɔda no adi a, yɛatumi akasa ahotoso mu,+ na yɛamfa aniwu amfi n’anim wɔ ne mmae no mu. 29 Sɛ munim sɛ ɔyɛ ɔtreneeni a, ɛnde munim nso sɛ, obiara a ɔyɛ adetrenee no, ɔno na ɔwoo no.+
^ Anaa “ɔkamafo.”
^ Anaa “ahonyade a nnipa de hoahoa wɔn ho.”
^ Anaa “antikristo.”
^ Anaa “wɔnyɛ yɛn dea.”